တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ဧပြီလကုန်မှာ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ဧပြီလကုန်မှာ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်
A South Korean health worker sprays disinfectant as part of preventive measures against the spread of the COVID-19 coronavirus, ataresidential area near the Daegu branch of the Shincheonji Church of Jesus in Daegu on February 27, 2020. - South Korea now has 1,766 cases, the highest number in the world outside China, where the disease first emerged in December and has since spread to dozens of countries. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) (Photo by JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)
နိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို လာမယ့် ဧပြီလကုန်မှသာ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ တရုတ်ကျန်းမာ ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ Zhong Nanshan က ထုတ်ဖော်ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
တရုတ်ဗဟိုအစိုးရဟာ လူတွေကို သွားလာမှု ကန့်သတ်မှုအပြင် အခြားလိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု လျော့ကျလာခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ် စတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကတည်းက ထိရောက်တဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ မယ်ဆိုရင် ကူးစက်သူအရေအတွက် နည်းပါးလာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
ဗိုငြးရပဈြ ကူးစကမြှု စတငခြွိနမြှာ ဆရာဝနတြှကေ သတိပေးခဲ့ပမယေ့ြ တရုတအြစိုးရက ထိရောကစြှာ ကိုငတြှယမြှုမရှိခဲ့ပါဘူး။
တရုတျနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ဧပွီလကုနျမှာ ထိနျးခြုပျနိုငျမယျ
ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု စတင်ချိန်မှာ ဆရာဝန်တွေက သတိပေးခဲ့ပေမယ့် တရုတ်အစိုးရက ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။
Previous articleဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကြောင့် ဂျပန်မှာ စာသင်ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားမယ်
Next articleမြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဂိတ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်နေ